Garoonka Diyaaradaha Magaalada Brusseles Oo Dib Loo Furay. – Bogga Calamada.com
Garoonka Diyaaradaha Magaalada Brusseles Oo Dib Loo Furay.
March 31, 2016 9:14 am Views: 10
Saraakiisha Laamaha Socdaalka ee Dowladda Nasaarada ee Biljamka ayaa sheegay in maanta oo Khamiis ah dib loo furayo Garoonka diyaaradaha ee magaalada Brusseles, kaas oo la xiray kadib qaraxyadii todobaadkii hor ka dhacay halkaasi.
Sida ay sheegeen Saraakiisha Laamaha Ammaanka iyo kuwa Socdaalka waxaa soo gaba gaboobay howlihii baaritaannada ahaa ee Garoonka ka socday tan iyo 22-kii Bishan March, waxaana baaritaannadaas lagu hubinayay in gudaha Garoonka ay ku jiraan Walxo qarxa oo looga shakisnaa inay uga dhex tageen raggii fuliyay howl-galladii ka dhacay magaalada Brusseles.
Wakaaladda Wararka ee Reuters ayaa kasoo xigatay Agaasimaha Garoonka diyaaradaha ee magaalada Brusseles in marka hore Garoonka lagu billaabi doono duulimaadyada Shirkadda diyaaradaha ee Loftahanza ee laga leeyahay dalka Biljamka, kadibna Shirkadaha kale ee duulimaadyada qaabilsan loo ogolaan doono in howlahooda dib u billaabaan.
Muddo Sagaal maalmood ah oo ay hakad ku jireen howlihii Garoonka diyaaradaha ee magaalada Brussles waxay Shirkadda duulimaadyada Loftahanza ee laga leeyahay Dalka Biljamka ay baajisay inkabadan 260 duulimaad oo ay ku tagi laheyd daafadaha kala duwan ee dunida, iyadoo Shirkadaha kale ee duulimaadka ee dalkaas ka howlgala ay baajiyeen boqollaal kale oo duulimaad, taas oo keentay in Kumanaan ruux oo rakaab ah uu dib dhac ku yimaado Safarradii ay geli lahaayeen.
Qaraxyadii todobaadkii hore ka dhacay Wadanka Biljamka waxaa ku dhintay 32 ruux, waxaana ku dhaawacmay 340 kale.Â Dowladda Biljamka waxay sheegtay in 17 ruux oo qeyb ka ahaa dadkii Qaraxyadaas ku nafwaayay inay u dhasheen dalkeeda, halka inta soo hartayna ay kasoo kala jeedaan Inkabadan 40 Dowladood oo Caalamka ka tirsan.